Finfinnee, Onkololeessa 26,2010 -Itiyoophiyummaatii alatti daandii fi furmaata biraa hin qabnu jedhan Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa.
Itiyoophiyummaan aarsaa qaalii abbootin keenya kaffalaniin bu'uura jabaa irratti dhaabame salphaatti hin burkutaahuu jedhan PMNO obbo Lammaa Magarsaan marii waliinii ummattoota Amaaraa fi Oromoo magaala Baahir Daar irratti taasifameen.
Haa ta'utii rakkooleen tokkummaa ummata biyyattii qoraa jiran asis achiis mul'ataa jiru.
Rakkooleen akkasii wayita uumaman taatee uumamedha jechuun akka taatetti ilaaludhaan rakkoolee kanneen waliin jiraachuu itti fufneerra.
Kunimmoo furmaata waarahaa akka hin fidneef sababa ta'eera. Kanaaf rakkoo kana waliin ta'uun hiikun hojii boruuf taa'u miti.
Abiddi yeroodhaaf qofa dibamu gaafa cimsee boba'u balaa guddaa geessisa. Kanaaf dibuu irra dhaamsutu furmaata amansiisaa fida.
Waan tokko tokkoon booddeetti hafuu qofa osoo hin taane sadarkaa nuuf malu irraayyuu gadi buunerra.
Wantoota addaan nu qoodan dhiisnee duudhaalee tokko nu taasisan irratti xiyyeeffachuutu nurraa eegama.
Obbolummaan keenya dhiphinaa fi bal'ina, milkaa'inaa fi kufaatii hedduu keessa darbee as gahe kana onneerraa cimsuu qabna.
Jila ummata Oromoo bakka bu'e fidee yeroon dhufu bashannannee deebi'if ykn sinsinnii tibba tokkoof miti.
Isin ummanni Amaaraa waan nu barbaachistaniif dhufne.
Hangam baay'annus isinii ala fulduratti tarkaanfachuu hin dandeenyu. Isiniis nu ala hin bareeddani.
Tigree, Beenishaanguul, Gaambeellaa, Somaalee fi kanneen biroos akkanuma nu barbaachisu.
Kan kaleessaa irraa barachas, har'a ittiin jiraachuu fi kan borii ittiin raajuu danda'uun abshaalummaadha.
Garuu immoo, duubatti mil'achaa fulduratti tarkaanfachuun hin danda'amu. Duubatti ilaalaa deemuun yookaan qilee nama buusa ykn ammoo karaatti nama hanbisa.
Mootoota sirnoota darbaniin madaa uumame tuttuquudhaan dalga wal ilaaluun diinoota humnaa fi waliigaluu tokkommaa keenyaan dhufu sadaatanii nutti malaniif karaa saaqa.
Yeroo kanatti wanti ummata biyyattii kanaaf hunda caalaa barbaachisu jaalaladha.
Wal jaallachuu. Jaalalli dawaa dhibee keenyaa ta'e. kunimmoo humnaa fi dhaadannoodhaan waan dhufu miti. Jaalalli walitti dhiyaachuu, walitti deemuu, rakkoo ofiif waliin mari'achuu keessattuu walii yaaduu fi wal gargaaruudhaan dhufa.
Yoo wal hin jaalanne, yoo walii hin yaadnee fi yoo tokko hin taane umurii rakkina keenyaa dheeressina.
Marti keenya hidda Itiyoophiyummaadhaan walitti hidhamneerra. Itiyoophiyummaan ammoo haraadadha. Onnee fi dhiiga hunda keenya keessa jira.
Guddina biyya keenyaa lammileen ishee hawwan bira gahuudhaa fi gaaddisa nageenya amansiisaa ta'e jalatti jiraachisuuf tokkummaa fi Itiyoophiyummaa qormaanni hedduu itti aggaamame cimsuun dirqama ta'a.
Saboonni, sablammoonnii fi ummattoonni Itiyoophiyaa as gahuu biyyattif ilmaan isaanii gabbaran tokkummaa Itiyoophiyaa haaraa kanaaf ammas tokkummaadhaan hojjachuu qabu.
Ummattoonni Amaaraa fi Oromoo rakkoo keenya qofa osoo hin taane rakkoo warreen kaanis hiikuu qabna.
Itiyoophiyummaanii fi tokkummaa ummattoota biyyattii dimismisaahaa jiru marii waliinii har'a taasisuu eegalleen ifuu eegaleera.
Duungoo kana saboota sablammootaa fi ummattoota biroofillee dabarsinee kennuu qabna.
Akka naannoo Oromiyaattillee yoo fudhannee ilaalle dargaggoonni jiran lakkoofsaan walakkaa ummatichaa ta'u.
Dargaggoota naannoo keenyaa fi akka biyyattiitti jiran baay'een isaanii jireenyi isaanii dinagdummaa fi hawaasummaa hoggantoota jaarraa kanaa kanneen taanerraa kan eegan miti.
Rakkoo baay'ee qabu. Rakkoo isaanii hiikuuf kutannoodhaan hojjachuu qabna. Jaallannees jibbinees hireen biyya keenya fuulduraa barruu harka dargaggoota har'aa irra jira. Dhugaa kana irraa baqachuu hin dandeenyu.
Kanaafuu dargaggoota biyya keenyaa sochii dinagdee fi hawaasummaa keessatti fayyadamoo akka ta'aniif jabaannee hojjachuu qabna.
Dargaggoonni dhimma biyya isaanii irratti waan isaanitti dhagahamu akka dubbatan, sochii siyaasa biyyattii keessatti akka hirmaatan gochuun walumaa galatti ofitti siiqsuu qabna.
Kun dirqama bahachuu qabnuu fi gahee keenya nurraa eeganidha. Bizu'alam Beenyaatu gabaase.(FBC)
Torbe Kana 10657
Ji'a Kana 77867
01/05/07 irraa eggalee 3062364